डाक्टरको लापरवाहीका कारण नाकको हड्डी बागिंएर अस्पत्ताल पुगेकी गुल्मीकी कमलाको मृत्यु !! – Complete Nepali News Portal
डाक्टरको लापरवाहीका कारण नाकको हड्डी बागिंएर अस्पत्ताल पुगेकी गुल्मीकी कमलाको मृत्यु !!
September 13, 2017	1,243 Views
चाबहिलस्थित ओम अस्पतालमा नाकको शल्यक्रिया गर्दा गुल्मीको मदाने गाउँपालिका पुर्कोट म्यालपोखरीकी ४० वर्षिय कमला भट्टराईको मृत्यु भएपछि अस्पताल तनावग्रस्त बनेको छ । आफन्तले अस्पतालमा नाराजुलुस लगाएका छन् ।
बुधबार दिउँसो उनको मृत्यु भएको हो । उनी चार दिनअघि (शनिबार अस्पताल) भर्ना भएकी थिइन्, उनी नाकको कुरकुरे हाड सोझ्याउन आएकी थिइन् । मृतकका आफन्तले भने डाक्टरको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन् ।
अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘सानो शल्यक्रियामा बिरामीको मृत्यु भयो, यस्तो घटना निकै कम हुन्छ, हामीलाई पनि दुख लागेको छ ।’ घटनाको छानबिन गरि कारबाही अघि बढाउने डा. गौतमले बताएका छन् । (नारीखबर बाट)